Ngathi | Xuzhou Jiamei Glass Iimveliso Co., Ltd.
Xuzhou Jiamei Glass Products Co., Ltd.kuyinto ishishini imveliso ngokukodwa ekupakisheni izithambiso ukupakisha izinto ekhaya nakumazwe aphesheya, kunye neeoli eziyimfuneko kunye zokuthambisa ukupakisha ekhaya nakumazwe aphesheya. Ithengisa kwaye ithengise iibhotile zeziqholo, iibhotile zeoyile eziyimfuneko, iibhotile zearomatherapy, iibhotile zokuthambisa cream, njl. Amashishini abhalisiweyo avunywe ngamasebe karhulumente afanelekileyo.
Ezona mveliso ziphambili zezi: iibhotile zeoyile ezimdaka ngebala, iibhotile zeoyile ezihlaza okwesibhakabhaka, iibhotile zeoyile eziluhlaza, iibhotile zeoyile ezibonakalayo ezibonakalayo, iibhotile zeoyile ezimhlophe, iibhotile zeXilin nezinye iimveliso.
Ukutshatisa ukuveliswa kwebhotile yeplastikhi yeoyile kubalulekile + kwiplagi yangaphakathi, kwibhotile yeoyile ebalulekileyo yeoyile yealuminiyam, ikepusi yeoyile ebalulekileyo yeoyile yokuthintela ukubiwa, ibhotile yeoyile yeplastikhi ebalulekileyo, ibhotile yeoyile ebalulekileyo, ikepusi yebakelite, njl.
Iibhotile zeoyile eziyimfuneko eziyilelwe ngemisebenzi emininzi zinokuqinisekisa ukutywinwa okugqwesileyo kunye nokumelana nokubola, kuqinisekisa ukuba i-100% yeoyile ebalulekileyo ayivuziswanga, kwaye ayizukuxhuma kwaye igqabhuke.
Inkampani yethu yasekwa ngo-2016.
CE, ANSI, SGS kunye ISO 9001 isatifikethi.
Nika elona xabiso kunye nenkonzo
Ubungcali, ukusebenza ngokukuko, iqela leenkonzo ezigqwesileyo.
Ikepusi kunye neplagi yedriphu inokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba ngokukhawuleza ukuhlangabezana nokuthotywa kweoyile ezahlukeneyo.
Iimveliso zoluhlu lweebhotile zeoyile eziyimfuneko ziveliswa ngokwazisa umatshini wokwenza iglasi oluzenzekelayo. Umgangatho wemveliso uzinzile, ukuphambuka kwamandla kuncinci, ukucoceka kuphezulu, ubukhulu bodonga lwebhotile kunye nombala ziyafana, kwaye amandla eempembelelo aphezulu.
Imigca igudile kwaye ihlala ihleli, kwaye amandla oxinzelelo lwangaphakathi aphezulu. Imveliso isetyenziselwa ukupakishwa kweekhemikhali ezintle ezinje ngokugcwalisa ioyile kubalulekile, izongezo zokutya, abaxumi bamayeza, kunye nezinto zokuhlaziya.
Ingqibelelo, ukomelela kunye nomgangatho wemveliso yeXuzhou Jiamei Packaging Products Co, Ltd. ziye zamkelwa lushishino. Abahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi bamkelekile ukuba batyelele, bakhokele kwaye bathethathethane ngamashishini.